Horyaalka 37aad Ee Kooxaha Heerka 1aad Kubada Cagta Dalkeena Oo Ka Furmay Magaalada Muqdisho
Waxaa galabta ka furmay garoonka Jaamacadaha degmada Hodan ee magaalada Muqdisho horyaalka Kooxaha K/cagta heerka 1-aad
Xafladda furitaanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Somalia iyo madaxda kala duwan ee xiriirada dalka Somalia iyo dadweyne kale.
Ku simaha gudoomiyaha Xiriirka Kubadda cagta Somalia Cali Saciid Guuleed,Xoghayaha guud ee xiriirka iyo madax kale oo ka tirsan xiriirka k/cagta iyo xiriirada soomaliyeed.
Sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay kulankaan qaar kamid ah xildhibaanada dowladda kmg iyo gudoomiyaha degmada Hodan Mudane Dhabaneey iyo mas’uuliyiin kale.
Horyaalkan oo lagu waday inuu furmo maalinta jimcihii ayaa dib u dhac dhanka farsamada uu ku yimid waxaana la furay galabta.
Ciyaarta furitaanka horyaaalka 37-aad ee kooxaha heerka 1-aad ayaa waxaa ay dhexmartay Kooxda Elman oo ah naadiga difaacanaya horyaalkan iyo kooxda Bad Baado oo dhawaan u soo baxday heerka 1-aad iyadoo waqtigi loogu talo galay ay 3-1 guusha ku raacday kooxda Elman inkastoo Ay Elman iska qasaarisay kubad rigoore ah.
Ahmed MoogeXafiiska Deeyoo.comSomalia-Mogadishu.Axmed_mooge@hotmail.com00252615140242 Latest News
Top 10 ten waxaa maanta kusoo qaadaney xidiga faneedka casrigan waa abdi holland2013-05-23 13:37:26	Heesaha maanta waa 5 shan sidii caadiga aheyd aad ayey u xiisa badan yihiin maan2013-05-23 13:03:31	Top 10 ten maanta waxaa ku haynaa 10 hees iyo fanaanka weyn ee la jecelyahay abd2013-05-21 12:44:23	Walii gabar ma sheekeysateen, kaftan aan lahayn godob ma isku gacala miirteen, h2013-05-21 10:49:30	Heesaheena maanta ee shanta ah waa kuwa xiisa badan oo play list isku xiga ah ku2013-05-21 10:45:34	Ayaan tromso oo kamid ah fanaaniinta kuwooda ugu caansan xilliyadan ayaa wareyso2013-05-20 17:02:42	Heestii degmo iyo fanaankii caan baxay king khalid oo muuqaal ah idiin haynaa ee2013-05-20 16:53:59	Alfanaan sahal amoore ayaa soo saaray video aad u qurux badan iyo heestiisii dho2013-05-20 16:33:52	Heestii maryan iyo fanaanka weyn legend bashiir ali hussein oo muuqaal ah nala d2013-05-19 19:03:38	Alfanaan saalax carab oo soo saaray hees muuqaal ah oo inbadan la wada sugayay e2013-05-19 11:17:39	Arimaha Bulshada
Top 10 ten waxaa maanta kusoo qaadaney xidiga faneedka casrigan waa abdi holland2013-05-23 13:37:26	Heesaha maanta waa 5 shan sidii caadiga aheyd aad ayey u xiisa badan yihiin maan2013-05-23 13:03:31	Top 10 ten maanta waxaa ku haynaa 10 hees iyo fanaanka weyn ee la jecelyahay abd2013-05-21 12:44:23	Walii gabar ma sheekeysateen, kaftan aan lahayn godob ma isku gacala miirteen, h2013-05-21 10:49:30	Heesaheena maanta ee shanta ah waa kuwa xiisa badan oo play list isku xiga ah ku2013-05-21 10:45:34	Home - Music - Artists - Contact - Login Admin - Deeyoo Music � 2010